Talooyin fudud oo ku saabsan Dhisidda Liiska Email iyo Bilaabidda Suuqgeynta Online
Lahaansho liis gareysiin ah ayaa kuu ogolaanaysa inaad bilowdo lacag. Dhammaanwaxay qaadataa hal email oo kugula talineysa qaar ka mid ah alaab cusub oo aad kor u qaadayso, oo aad yeelan kartolaakiin mushahar badan, laakiin haddii aad ku guuleysatey inaad sameysid liis weyn. Naqshad khabiir adeegga Digital,Michael Brown wuxuu wadaagayaa talooyin waxtar leh oo ku saabsan sida loo bilaabi karo suuq-geynta internetka.
Bal qiyaas in aad heshay macluumaad ku saabsan cusubalaab, oo aad ka heshid qiimo iyo waxtar. E-mail fudud ayaa loo diray liiska 10,000 qof oo leh aheerka wadahadalka ee 5% waxay keeneysaa 500 iibsiga. Isagoo u maleynaya inaad kasbatay $ 10 commission oo iib ah,taas oo ah qiyaas aad u xajisan, taasi waxay ku kasbaneysaa $ 5,000 hal maalin, wax ka yarsaacad shaqo. Weli ma hubin dhismaha liiska emailka?
Dabcan, liiska emailka ee 10,000 waa mid dhexdhexaad ahliiska, kaas oo qaadan doona dhowr bilood si loo dhiso, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad bilowdo inaad maanta ku shaqeyso, maahan berri. TheSi dhakhso ah ayaad u bilaabi kartaa liiskaaga, sida ugu dhakhsaha badan ee aad ku heli kartid inaad dib u fadhiisatid, u dir email ku saabsan cusubwax soo saarka, oo kasbado wax ka badan saacaddaas marka loo eego inta badan ee aad caadiyan samayn lahayd bil gudaheed.
Faa'iidooyinka Liiska Emailka
Kharashka waxtarka leh ee samaynta suuq-geynta tooska ah
Awoodda lagu falanqeynayo ereyadaiyo waxyaabo kale oo muhiim ah oo kaa caawinaya inaad istiraatiijiyo istaraatiijiyada emailkaaga
Dhismaha maamulka iyo kalsoonida iyada oo la bixinayo qiimaha waqtiga
Dib-u-cusboonaanta oo sarreeyasi loo dhiso xiriirka joogtada ah ee liiska emailkaaga
Mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee dhisma emailliistada waxay ku xiran tahay macaamiishaada. Waa wax aad u caan ah akhristayaasha caqliga leh si ay u qoondeeyaan "khibradooda"ka dibna ka saar liistada emailkaaga kadib. Waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelatid inaad bixiso qiimaha iyagasi joogto ah intaad ku badashan e-maylkaaga, haddii kale, u ducayso shaqadaada adag iyo faa'iidada mustaqbalka ..
Ololeyaal wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo email ah ayaa dhammaantood ku saabsanhabka saxda ah. Ka fikir dhammaan emaylaha aad maalin kasta hesho iyo sababta qaar ka mid ah ay ku qabtaan adigadareenka iyo kuwa kale ayaa la tirtiray. Waxaa jira saynis ah in la helo macaamiisha xiisaha iyo kalsoonida aemayl fudud. Tani waa farqiga u dhexeeya "spam" ee aad hesho iyo emaylka aad riixdo si aad wax badan uga ogaato.
Qodobbada Muhiimka ah si aad u xasuusato Markaad Dhisayso Liiskaaga
Abuuro kalsooni adoo siinaya khibrad iyo qiimo ahaan nuucaaga bartilmaameedka
Dareemo dareenkoodasameynta sheekooyinka akhristeyaashu ay ku raaxaystaan ​​
Ku dhaji sheekadaada fikradda dhabta ah sidamarqaatiyaal si loo helo iyaga xitaa xiiso badan
Waa muhiim inaad si toos ah ula hadasho macaamiishaada.Waad ogtahay sababta ay u saxiixeen, markaa iyaga kula hadal qaab u fiirsanaya. Ma jiro qof jecel emailoo ka hadlaya dhibco aan muhiim ahayn, markaa si toos ah oo toos ah u hesho. Ka dibna u sheeg sheeko ay iyagu yihiinwaxay la xiriiri karaan. Tani waxay keenaysaa dareenka in uu yimaado dusha, taas oo ah waxa aad raadineyso
Habka ugu wanaagsan ee loo dhisi karo liiska emailka waa inaad isticmaasho ajawaab-celin otomaatig ah. Waxaad samayn kartaa emayl e-gareeg ah oo todobaadyo ah oo mustaqbalka ah, iyo mar markaa la qabto,uma baahnid inaad wax sameyso. Waxaa jira fursado badan, laakiin Aweber wuxuu u muuqdaa inuu yahay mid aad loo qiimeeyo. Halkaawaa dhiirigelinta helitaanka beddelaad bilaash ah ama mid ka jaban laakiin dhibaatada taas oo ah in emailadaadu ay xadidan tahayhal usbuuciba, ama waxay ku dhammaan doonaan sanduuqa boostada ee macaamiisha.
Khadadka mawduuca mawduuca waa in ay noqdaan kuwo aan la adkeyn kariniyo helitaanka fiican ee qof kasta oo cajiib ah. Storytelling waa lagama maarmaan in la qabsado maskaxdooda oo laga helo mawduucaagafikirka. Barashada wax badan oo ku saabsan copywriting ayaa kaa caawin doona inaad soo saaro emails qiimo leh oo aad u hesho macaamiisha aad wax akhriska iyo rabitaanka.
Xusuuso inaad ku dhisto kalsoonida liiska emailkaaga kahorwaxaad bilowdey badeecooyin qashin ah iyo doonaya iib. Awooddu waxay ka timaadaa kalsooni, taasina waxa ay kuu ogolaaneysaa inaad iibsato mustaqbalka.
Hubi inaad u sheegto akhristaha waxa la qabanayo. Waawaxaa laga yaabaa in ay u muuqato mid is burinaya, laakiin daraasaduhu waxay caddeeyeen in qofka loo sheegayo in wax la qabto uu helo jawaab ka wanaagsan taniyaga oo waydiisanaya inay wax qabtaan. "Is-diiwaan-galinta hadda ee tababarka 1-aad-1-aad" waxay noqon doontaa mid aad ufiican "Miyaad rabtaa inaad iska diiwaangeliso tababarka 1-aad-1?"
Waxaan rajeyneynaa, maqaalkani wuxuu kaa caawinayaa inaad barato awax ama laba ah oo ku saabsan dhismaha liiska emailka. Waxa ugu muhiimsan ee la ogaado waa inaadan sugi karin inaad bilowdo. Waxay ka mid tahaymuhiimadaada muhiimka ah ee aad ku bilowday hawshan isla markiiba. Haddii aad qabto wax shaki ah, tixraac Sare Adeegyada Dijital ahsidaas darteed waxaan kuu sameyn doonaa waxyaabo kuu sahlan Source .